​Somaliland oo diiday qodob ka soo baxay shirka IGAD ee Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar ​Somaliland oo diiday qodob ka soo baxay shirka IGAD ee Muqdisho
​Somaliland oo diiday qodob ka soo baxay shirka IGAD ee Muqdisho
Hargeysa (Caasimada Online) – Maamulka Somaliland ayaa ka horyimid war-murtiyeed kasoo baxay shir madaxeedka 28-aad ee urur goboleedka IGAD, kaasoo lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Somalia.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo oo ka hadlayay sida uu arko shirkan oo markii ugu horraysay bur-burkii dowladdii dhexe ee Somalia lagu qabto ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo iyo tallaabo horay loo qaaday, isagoo xusay inay xilli walba jecelyihiin nabad iyo hormar uu gaaro dalka.
“Sida aynu la wada soconno, waxa Caasimadda Dalka Somalia lagu qabtay maanta Shir Sannadeedkii, Urur Goboleedka ay ku Buhoobeen Dalalka Bariga Africa ee IGAD. Ugu horreyn, waanu soo dhawaynaynaa in Shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho, waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. Somaliland waxay soo dhawaynaysa dedaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka Midowga Africa sidii nabad loogu soo dabbaali lahaa Dalka Somalia, isla markaana loogu dhisi lahaa Dawlad adag oo hanata xilka iyo masuuliyadda saaran,”Ayuu yiri madaxweyne Siilaanyo.
Siilaanyo ayaa cambaareeyay qodobada kasoo baxay shirkaas, gaar ahaan qodob taabanayay midnimada dalka Somaliya, isagoo xusay inuusan khusayn islamarkaana yihiin waddan madax-bannaan oo ka go’ay Somaliya inteeda kale.
“Waxaanu cambaaraynayna war-murtiyeedka ka soo baxay Shirka Madaxda IGAD ee ka dhacay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Qodobka ka hadlaya Midnimada Somalia. Waxaanu u aragnaa mid la majara habaabiyay, oo aan ka turjumayn xaqiiqada dhabta ah ee xaaladda Somalia iyo Somaliland ka jirta. Waxaanu dunida u caddaynaynaa in Somaliland tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay Nidaamka Federaalka Dawladda Somalia, ee looga taliyo magaalada Muqdisho,”Sidaas waxaa yiri Madaxweynaha Somaliland.
Wuxuu sheegay Siilaanyo, isagoo sii hadlayay inaysan matalin maamulkiisa, shaqsiyaad ku sugan caasumadda Somalia, isagoo meel kadhac iyo maagisba ku tilmamaay in la wakiisho xubno aysan iyagu dirsan.
“Waxaanu u caddaynaynaa Beesha Caalamka in aanay metelin Jamhuuriyadda Somaliland shaqsiyaad Muqdisho laga cugtay. Waxaanu u aragnaa maag iyo meel ka dhac qaawan, in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aan shacbiweynaha Somaliland dooran, ama aanay ceelalyo u diran. Ummadda Somaliland waxaa matala oo kaliya, kana mas’uul ah, madax ku timi doorasho xor iyo xalaal ah (Xukuumad iyo Baarlamaan),”Ayuu hadalkiisa ku daray Siilaanyo.
Shacabka Somaliland ayuu ugu baaqay inay u istaagaan ilaalinta midnimadooda islamarkaan meel ugasoo wadajeestaan cid kasta oo wax u dhimaysa.
Ugu dambayn madaxweynaha Somaliland ayaa dalalka Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur Goboleedka IGAD, Maraykanka, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka iyo dhammaan Dalalka ku Midoobay Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ku wargaliyay qodobada hoos ku xusan:-
– Masar iyo Suuriya, waxay isku darsadeen 1958, waxay kala noqdeen 1961-kii.
– French Sudan iyo Senegal, waxay isku darsadeen 1960-kii, waxay kala noqdeen 1960-kii.
– Gambia iyo Senegal, waxay isku darsadeen 1981-kii, waxay kala noqdeen 1989.